Pane zuva rakaita nhasi Ian Murdock akatisiya | Linux Vakapindwa muropa
Tese takanzwa nhau dzinosuwisa dze kufa kwaIan Murdock, pazuva iri sezuva rekufa kwake. Ian akatisiya musi waDecember 28, 2015. Ian pasina mubvunzo aive mumwe wehunhu hwakakodzera kwazvo pasirese uye yakavhurwa sosi software kune yake yese nhaka uye basa rinoenderera richikura mushure mekufa kwake. Akatiunzira zvinhu zvakawanda, asi pamwe chikuru kana chimwe chinoyemurwa nemunhu wese nekumuremekedza ndicho chikuru chirongwa cheDebian, chimwe chekutanga kupihwa kweGNU / Linux kwakabvumira iyo Torvalds kernel kuziviswa mukutanga kwakaoma.
Ian Murdock akazviuraya nekurembera, uye zvese zvaive zvakashamisa uye zvisingatarisirwe. Ngazvive sezvazviri, iko kurasikirwa kukuru kwega uye tarenda rinogara richirangarirwa. Uyu wechiGerman aizozvarwa muConstance muna Kubvumbi 28, 1973 uye aizotisiya isu makore makumi mana nemana pazuva rakataurwa pamusoro apa. Asi panguva yese iyoyo asiya nhaka hombe kutanga nekuve mutungamiri weprojekti yeDebian, kushandira Sun Microsystems, uyezve kutora chikamu mune mamwe mapurojekiti mazhinji seaya eSalesforce Marketing Cloud uye chirongwa chakakurumbira cheDocker, kuenda kuburikidza nekuva muvambi wekambani Progeny Linux Systems, zvave CTO yeLinux Foundation, uye Indiana purojekiti mutungamiri.
Zvechokwadi chirongwa cheIndiana Iyo haina zvakawanda zvekuita nenyika yeLinux, asi neiyo yemahara software, sezvo iri yemahara inoshanda sisitimu iyo yakaburitswa muna 2005 kubva kune yakasarudzika vhezheni yeiyo inonakidza Solaris kubva kuSun Microsystems panguva iyoyo (ikozvino yaive ne Oracle). Kana iwe uri muteveri akatendeka weLxA, zvirokwazvo iwe unotoziva Project Indiana, sezvo isu tataura nezvazvo pano pane imwe nguva.
Pamusoro pebasa rake rehunyanzvi, Murdock akatisiirawo humwe hupfumi hunonakidza, senge iyo Debian Manifesto. Basa raaizonyora mumazuva ake evadzidzi kuYunivhesiti yePurdue kwaakapedza kudzidza mucomputer sainzi muna 1996 uye yaizoisa hwaro hweprojekti yaDebian uye yaizoshanda sereferenzi yemamwe ma manifesto kana mazano kubva pasirese software yemahara uye kodhi yakavhurwa.
Kune izvi zvese: RIP Ian uye ndokutenda!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pazuva rakaita nhasi Ian Murdock akatisiya
Kutenda kwaari, vazhinji vedu tinoshandisa kugoverwa kweGNU linux nekuti kunyangwe kana usingazomboshandisa debian, zvingangoita kuti kana wakamboshandisa ubuntu, mint kana zvimwe zvinobva, ndine debian mumuchina chaiwo uye zvinoonekwa kuti ndizvo kuve iri nani distro, kwete chete kune maseva.
Mufaro uye zorora murunyararo Ian
Ndatenda zvikuru VaIan Murdock, kwamuri ndine rugare rwandinarwo izvozvi… Ndatenda zvikuru !!!
Pindura kuna Alef
DEP uye ndinotenda Ian.
Ndatenda IAN, haufanire kunge wakasiya, ndinoziva kuti wakatambura nekushushikana asi vateveri veLinux uye mahara software vanoyemura iwe zvakanyanya Vazhinji vedu tingauraye nekuda kweruzivo uye nembiri yauinayo. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti iwe uchiri mupenyu, mwanakomana wako ndiye injini yeramangwana rinovimbisa nekupihwa zvirinani mazuva ese.
Ndeipi dhongi yekutaura nezverufu apo murombo Ian akazviuraya. Ngatiregei kuva mapenzi uye rangarirai murume uyu nekunakisisa kwekuyemura. Uyu mukomana haana kuita zvinhu zvemukurumbira, asi nekuti aizvinzwa.